Isisu somhambi singangenso yenyoni – Buza Noma Yini
Isisu somhambi singangenso yenyoni
Solved2.54K views July 9, 2021 ulimi LwesiZulu
Donovan (anonymous)	 June 24, 2021 1 Comment
Isisu somuhambi singangenso yenyoni 👈🏾 ngicela ukubuza ukuthi ngabe lokhu kuchazani?
admin commented June 24, 2021
Asilungise; kuthiwa “Isisu somhambi KASINGAKANANI, singangenso yenyoni”
Vezi (anonymous)	 Posted June 24, 2021	 0 Comments
INSO – Lapha kukhulunywa ngesitho somzimba esitholakala ngaphakathi emzimbeni esidlala indima enkulu ekuphileni komuntu okanye kwesilwane. Inso iyona phela esiza ekuhlanzeni konke ukugcola okungena emzimbeni, kungaba igazi elingcolile ngenxa yokungaphili okanye ubuthi obungene ngokuphuza izinto ezingalungile. Inso kungumsebenzi wayo ukuhlanza okanye ukukhuculula konke lokhu okuwuketshezi okusemzimbeni ikuphendule umchamo ukuze kuphume ngesitho sangasese, singasho nje ukuthi INSO iyafana nesisefo kumuntu okanye esilwaneni.
UMHAMBI – Lapha kukhulunywa ngesivakashi okanye ngomuntu okungeyena wakulowo muzi.
Qaphela: Makukhulunywa ngesisu akukhulunywa ngalokhu okubonayo okungezansi kwesifuba emzimbeni kepha kukhulunywa ngesisu esingaphakathi kumuntu okanye esilwaneni lapho ukudla kuyakhona emva kokugwinywa. Ngenxa yobuncane benyoni nenso yayo incane kakhulu ingakho isisu somuhambi siqhathaniswa nayo.
Sisho ukuthini ke lesaga empilweni
Umangabe uyisivakashi zifundise ukusheshe wenele, awusuli ngekati uyake uthi choko choko ushiye. Lokhu kwenziwelani na? Kwakuwumkhuba wokuzijwayeza ukuthi noma ufikele endaweni okanye emzini abahlwempu kuwona kungazweli kuwena ophakeliwe ngokungasuthi futhi nakulowo muzi bangazitholi sebenengcindezi kanye namahloni wokuthi awudlanga ngokwanele.
Anonymous	 Posted June 24, 2021	 0 Comments
Umuntu oyisihambi udla noma into incane akakhonondi
Anonymous Answered question June 24, 2021